मैले १७ वर्षसम्म गाडी देख्न पाएको थिइँनः दयाहाङ राई – Khabar Silo
मैले १७ वर्षसम्म गाडी देख्न पाएको थिइँनः दयाहाङ राई
दयाहाङ राईको जन्म भोजपुरको खावामा ०३७ साल वैशाख १ मा भयो।उनको बाल्यकाल गाउँमै वितेको थियो। ०६० सालदेखि अभिनय क्षेत्रमा आएका राईले हालसम्म ३५ वटा चलचित्रमा अनिनय गरिसकेका छन्।उनका नाटको संख्या २५ जति छ। तर, अहिलेका चर्चित कलाकार राईले १७ वर्षसम्म गाडी चढ्न त के देख्न पनि नपाएको खबर आज शुक्रबार प्रकाशित भएको साप्ताहिकले छापेको छ।
‘मैले आफ्नो जीवनको धेरै लामो समय गाउँमा विताएँ,’ राईले भनेका छन्, ‘१८ वर्षको उमेरसम्म गाउँमै बित्यो। कलेज पनि मैले गाडी नभएको ठाउँमा पढेँ। गाडी देख्न मैले १७ वर्ष कुर्नुपर्यो।’अहिले चाहीँ राईको गाउँ भोजपुरको खावामा गाडी पुगिसकेको छ।
काठमाडौं ०५ फागुन / प्रेम जोडी सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘माइकल अधिकारी’को छायाङ्कन समापन भएको छ । झापा र इलाममा ३८ दिन छायाङ्कन गरेर छायाङ्कन सकिएको हो । गोपी कृष्ण मुभिजको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा सौगात र सृष्टिसँगै अशान्त शर्मा, ऐनी कुँवर, हेमन्त बुढाथोकी, विद्या कार्की, सुजना ढकाल, दिलीप बोहरा लगायतका […]
हे भगवान ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बनेका यी क्युट बालकलाई हेर्नुस; (हेर्नुस् भिडियो)
Posted on April 29, 2021 Author khabar silo
विगत केही वर्षअघि देखि निकै नै नेपालीहरुबिच सामाजिक संजाल टिकटक निकै नै लोकप्रिय छ । यहांं सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छ । कति मानिसहरु यहाबाट निकै नै भाइरल बनेका छन । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन । त्यस्तै अहिले पछिलो समयमा एकजना नाबालक पनि टिकटकमा उत्तिकै […]
नायिका स्वेता खड्काको बिहे मंसीर २२ गते यी केटा सङ्ग हुदैं !
Posted on December 1, 2020 Author khabar silo
अभिनेत्री स्वेता खड्काले धनगढीका युवकसँग मंसीर २२ गते बिहे गर्दैछिन् ।स्रोतका अनुसार नायिक स्वेताले धनगढीका युवक विजेन्द्र रावतसँग मंसीर २२ मा लगनगाँठो कस्दैछिन् । स्वेताले बिहे गर्न लागेका युवक धनगढीका विजेन्द्र रावत हुन् ।उनका बुबाले धनगढीको फनपार्क सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आफुभन्दा कम उमेरको युवकसँग बिहे गर्न लागेकी स्वेता र विजेन्द्रको परिवारले तयारी थालेका […]
हृत्तिक रोशनलाई ३० हजार युवतीको प्रपोज
नेयमार आज बार्सिलोनाको अदालतमा उपस्थित हुँदै